Sheekh Shariif oo war ka soo saaray waxa ka jira ‘in musharraxiin ay isu tanaasuleen‘. | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Sheekh Shariif oo war ka soo saaray waxa ka jira ‘in musharraxiin...
Sheekh Shariif oo war ka soo saaray waxa ka jira ‘in musharraxiin ay isu tanaasuleen‘.
Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ahna musharax Madaxweyne Mudane Shariif Sheekh Axmed
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya ahna musharax Madaxweyne Mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa si kulul u beeniyay warar sheegaya in musharraxiinta qaarkood ay isu tanaasuleen.
Gudoomiyaha Xisbiga Himilo Qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa beeniyey wararka sheegaya in musharraxiin qaar ay isku tanaasuleen oo ay qaar ka laabteen hankoodii xildoonka ahaa.
Sheekh Shariif kama uusan hadlin wararka la hadal hayey maalmahaan oo ahaa inuu xildhibaanimo raadsanayo si uu galaan gal ugu dhex yeesho golaha shacabka haddii uu ku hungoobo doorashada markii Afaraad uu u tartami doono.
Haddaba halka hoose ka khariso qoraalka uu soo saaray Sheekh Shariif.
‘‘Waxaan had iyo goor aaminsannahay dimuqraadiyadda iyo in lagalo tartan xor ah, ku salaysan aragti siyaasadeed iyo isbahaysi, taasoo aan waqti soo galinnay welina aan u taagannahay.
Sidaa darteed waxaan rabaa inaan caddeeyo inaysan waxba kajirin wararka ku saabsan shir ay yeesheen waxgaradka iyo siyaasiyiinta beelaha mudullood oo lagu gaaray heshiis isku tanaasul ah oo la dhex dhigay murashaxiinta qaar.‘‘
musharaxiin isu tanaasulay
Sheekh Shariif beenin